Global Voices teny Malagasy · Andriamifidisoa Zo – Desambra 2007
Andriamifidisoa Zo · Desambra, 2007
Translation Editor · Nanomboka nandika tamin'ny 11 Septambra 2007 · 2450 Lahatsoratra
Bilaogera amin'ny teny malagasy. Teraka sy mipetraka eto Madagasikara. Miezaka mampahafantatra araka izy azo atao ny zavamisy eto an-toerana ho an'ny mahay teny malagasy rehetra sy ireo miezaka hahay ny teny malagasy ihany koa.
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Desambra, 2007
28 Desambra 2007
Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Amerika Latina
Mpanoratra Kamla Bhatt · Pakistana
Mpanoratra Neha Viswanathan · Pakistana
27 Desambra 2007
Ezypta: Rama Yade
Mpanoratra Tarek Amr · Ejipta
Tsy amin'ny maha Rama Yade – sekreteram-panjakana frantsay misahana ny raharaham-bahiny sy ny zon'olombelona – azy ka amin'ny fijery politika no itondran'ny mpamaham-bolongana Ezyptiana Eastern Bird ity lahatsoratra manaraka ity (Ar). Raha ny marina dia lohahevitra hafa mihitsy no nanaitra ny aingam-panahiny ka nahatonga azy hanoratra io lahatsoratra eo ambany io. Toy...
Ny fahatsaran’i Suso sy ny fahamendrehan’olombelona
Mpanoratra David Sasaki · Amerika Latina
Lahatsoratra nivoaka tao amin’ny Rising Voices. Ataoko fa na aiza na aiza dia ahitana avokoa ireny olona manana ny lazany na amin’ny tsara na amin’ny ratsy ireny avokoa, noho ny talentany, ny toetrany na noho ny tantarany manokana. Olona (maningana) manana fiainana toa miavaka toy amin’ireny tantara voasoratra na voalahatsary...
24 Desambra 2007
Thailand: Mitarika ny PPP
Mpanoratra Preetam Rai · Thailandy
Bangkok Pundit eto no mamoaka tsikelikely sy mamakafaka ny valim-pifidianana izay vao novitaina teo. Ny PPP (People's Power Party na antokon'ny fahefam-bahoaka), izay noheverin'ny maro fa antoko nipoitra avy amin'ilay antoko nofoanana Thai Rak Thai no mitana ny laharana voalohany amin'ny fahazoana seza amin'izany. Preetam Rai
21 Desambra 2007
Fifidianana Madagasikara : Fampitandremana ho an’ny fitondrana ?
(saripikan'i Harinjaka) Tamin’ny valim-pifidianana monisipaly notontosaina tamin’ny herinandro lasa teo ho an’Antananarivo, renivohitry Madagasikara, resin’ny kandida mahaleo tena Andry (Nirina) Rajoelina ny avy amin’ny antokon’ny filoham-pirenena Hery Rafalimanana, amin’izao fivadihan-javatra izao dia heverin’ny mpamaham-bolongana maro fa fampitandremana ho an’ny filoha ankehitriny io vokatra io. Mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny...
20 Desambra 2007
Libanona: Raha foana tahirin-tsolika
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Libanona
“Halavirana hatraiza no vitan'ny fiaranao rehefa manamarika (mena) ny tabilao fanamoriana fa lany ny tahirintsoliky ny fiaranao?” hoy ny fanontanian'ny mpamaham-bolongana Libaney Mark, izay te-hampilaza amin'ny mpamily fiarakodia hoe hatramin'ny firy kilometatra moa no vitan'ny fiara entinao rehefa voatondro ny faritra mena fahalanian'ny solika ao aminy. Amira Al Hussaini
Neo Zealand: Facebook sy ny politika
Mpanoratra Preetam Rai · Nouvelle Zelande
Nohazavain'i Kiwiblog ny iray amin'ny iditra Facebook iray antsoina hoe NZ Politics ho an'ny Neo Zealandey. “Fidianao izay antoko politika tohananao, dia jerena avokoa avy eo izay tohanan'ny namanao rehetra. Afaka misafidy ianao na aseho vahoaka na tsia ny safidinao.” Preetam Rai
Iran: Mpianatra telo noafahan'ny fitsarana madiodio
Raha inoana ny voalazan'i Daneshjoo blog[Farsi], dia noheverin'ny fitsarana iraniana fa tsy meloka ny mpianatra telo izay efa any amponja manana ireto fanampian'anarana manaraka iretoTavakoli,Ghasaban ary Mansouri. Efa voafonja nandritra ny 9 volana izy ireo ary noterena hanaiky fa nanoratra lahatsoratra manaratsy ny fitondrana. Ankehitriny moa dia tapaky ny fitsarana fa...